Fanafihana tany Belobaka : Mpivarotra enta-madinika iray maty voatifitra
Jiolahy mitam-basy manodidina ny 10 no nanafika tao Fenomanana, fokontany Fenoarivo any Belobaka Tsiroanomandidy, afak’omaly alina. Mpiavotra iray, raim-pianakaviana, no lasibatra ary notifirin’ireo olon-dratsy raha vao tafiditra ilay tokantrano izy ireo.
Maty teo no ho eo ihany io rangahy io. Lasa avoko ny entana rehetra tao amin’ilay fivarotana.
Mandry tsy lavo loha amin’izao fotoana izao ny mponina amin’iny faritra afovoany andrefana iny. Mitam-basy mahery vaika mihitsy mantsy ireo dahalo any ambanivohitra. « Raha ny tifitra nahazo ilay raim-pianakaviana no jerena dia « kalachnikov » mihitsy no nahazo azy. Teo akaikin’ny fony no voatifitra », hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
« Nialoha ny fanafihana dia nanapoapoaka basy tao amin’ilay tanàna ireo dahalo. Natahotra ny mponina ka tsy nisy sahy nivoaka raha vao nandre izany. Avy hatrany dia tokantranona mpivarotra no novantanin’ireo olon-dratsy. Rehefa maty ilay raim-pianakaviana dia nahoron’ireo olon-dratsy daholo ny entana azo entin-tanana tao amin’ilay fivarotana », hoy ihany ity loharanom-baovao ity.
Omaly maraina be no fantatra fa nihazo ity tanàna ity ny zandary avy ao Belobaka renivohitry ny kaominina. « 45 km miala ny Belobaka no misy ity tanàna ity ka dia an-tongotra no andehanana mankany. Ora 7 na indray andro mihitsy vao tonga any an-toerana. Tsy mbola fantatra hatreto izay vola sy entana lasan’ireo dahalo ireo. Mbola any an-toerana mantsy amin’izao fotoana izao ny zandary manao ny famotorana rehetra », hoy kosa ny fanampim-baovao avy amin’ny Zandarimariam-pirenena.